Ogaden News Agency (ONA) – Diyaaradaha Israa’iil oo Duqeeyay Magaalada Dimishiq ee Dalka Suuriya.
Diyaaradaha Israa’iil oo Duqeeyay Magaalada Dimishiq ee Dalka Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ June 27, 2018
Warbaahinta dalka Suuriya ayaa sheegtay in laba gantaal oo Israel ay soo tuurtay ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimishiq, caasimada dalka Suuriya.
Wakaaladda wararka ee SANA oo warkan baahisay ma aysan shaacinin wax khasaare nafeed ama burbur ah oo ka dhashay weerarkan, oo ay sheegtay in Israel ay kaga jawaabeysay guuldarro kasoo gaadhay dagaal ay mucaaradka Suuriya kula gashay xuduudda koonfureed ee ee dalka Suuriya.
Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in gantaallada ay ku dhaceen bakhaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiyada dowladda Suuriya taageera.
Israel ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay dalka Suuriya intii uu socday dagaalka sokeeye ee dalkaas, ayada oo beegsaneysa inta badan inay joojiso in kooxda Xizbullah ee Iran ay taageerto ay hub soo geliso dalka Suuriya. Milatariga Israel ayaan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ka fuliyaan dalka Suuriya.